क्रिकेटमा चलचित्र बनाउने सपना पूरा गरेको छु - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
क्रिकेटमा चलचित्र बनाउने सपना पूरा गरेको छु
बीबी फुयाँल, निर्देशक
अन्तिम अवस्थामा च्याम्पियनको प्रदर्शन कसरी रोकियो ?
विकास बोर्डमा एक जना कलाकारले उजुरी हालेपछि अन्तिम अवस्थामा सेन्सर हुन नसकेपछि रोकिएको हो ।
उजुरी हाल्नु पर्ने कारण के थियो ?
क्रिकेट खेल्न नआउने थाहा पाएपछि पूर्व निर्धारित कलाकारलाई हामीले अन्तिम अवस्थामा परिवर्तन गरेका थियौं, उनैले बोर्डमा उजुरी हालेका रहेछन् ।
अब कहिले हुन्छ त प्रदर्शन ?
सबै समस्या समाधान भएपछि फागुनको अन्तिम साता प्रदर्शन गर्ने योजना छ ।
अभिनेता बन्न आएको मान्छे कसरी निर्देशक बन्नुभयो ?
करिब एक दशकअघि कलाकार बन्न आएको हो, तर कसैले पत्याएनन् ।
कलाकार बन्न नपाएपछि के–के गर्नुभयो ?
चलचित्र क्षेत्रका प्राय: सबै विधामा काम गरें । प्रारम्भमा प्रोडक्सन, त्यसपछि मेकअप आर्टिस्टका रूपमा काम गरें । त्यसपछि भिजुअल एडिटरसमेत भएँ । सहायक निर्देशक तथा मुख्य सहायक निर्देशनको काम गरेपछि मात्र निर्देशक बनेँ ।
अहिलेसम्म कतिवटा चलचित्र निर्देशन गर्नुभयो ?
मैले अहिलेसम्म द लास्ट किस, लभ यू म्यान, रोमान्स, स्पर्श, रक्तभोग तथा च्याम्यिन गरी जम्मा ६ वटा चलचित्र निर्देशन गरें ।
आफ्ना चलचित्रमा प्राय: यौनलाई फोकस गर्नुहुन्छ नि ?
केही चलचित्रमा यौनले प्राथमिकता पाएको हो । दर्शकको चाहना तथा बदलिँदो सामाजिक अवस्थालाई चित्रण गर्न बाध्यतावश यो विषयमा प्रवेश गरेको हुँ ।
तपाईंका केही चलचित्र त विवादमा पनि आए नि ?
पुरुष समलिंगीहरूको प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘लभ यू म्यान’ विवादमा आएको हो । नेपालमा पहिलो पटक यो विषय समावेश भएकाले पनि विवादमा पारियो ।
‘च्याम्पियन’ कस्तो चलचित्र हो ?
नेपाली क्रिकेटले पाएको लोकप्रियतालाई चलचित्रमा कैद गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो चलचित्रमार्फत क्रिकेटलाई सरकारले नै प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छौं ।
क्रिकेटको विषयमा चलचित्र तयार पर्दा कुनै समस्या आयो कि ?
पहिलो कुरा त विषयवस्तुका लागि करिब १ वर्ष क्रिकेटर तथा कोचहरूसँग संगत गर्नुपर्‍यो । क्रिकेटरको भूमिका निर्वाह गर्ने कलाकार छनौट गर्नु पनि चुनौती नै थियो ।
दिक्पाल कार्कीलाई क्रिकेटरको भूमिकामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय कसरी गर्नुभयो ?
प्रारम्भमा त हामीले पारस खड्कालाई नै प्रस्ताव राखेका थियौं । उहाँले अभिनय गर्न नआउने बताएपछि अन्य युवा क्रिकेटर समक्ष पनि प्रस्ताव राख्यौं । क्रिकेटरले राम्रो क्रिकेट खेल्ने तर अभिनय र नृत्य गर्न नजान्ने भएकाले दिक्पाल कार्कीलाई नै क्रिकेटर बनाइयो ।
दिक्पाललाई क्रिकेटर बनाउन कत्तिको मेहनत गर्नुपर्‍यो ?
दिक्पालले चलचित्रमा बलरको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसका लागि उनले करिब दुई महिना मैदानमा नेपाली खेलाडी तथा क्रिकेटका कोच जगत टमाटासहितको समूहसँगै प्रशिक्षण लिए ।
प्रकाशित :फाल्गुन २०, २०७२